« Hiasa sa hiandry seza ? » -
AccueilTresaka« Hiasa sa hiandry seza ? »
« Hiasa sa hiandry seza ? »
05/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Ny erikerika no maha tondra-drano, ny mitabe tsy lanin’ny mamba, izay be no basy… oha-pitenena sy ohabolana maneho fa ilaina ny firaisankina, ilaina ny fifanohanana. Fotoanan’ny fanohanana tokoa izao eo amin’ny sehatry ny politika, indrindra amin’ny fiatrehina ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena Malagasy.
Mialoha ny fiandohan’ny fampilezan-kevitra, dia nanao rano lava ny fanambarana fanohanana. Ka fanohanana arahin’asa ve izy ireny sa fanohanana miandry seza ? Ho hita taratra mandritra ny fampielezan-kevitra ny fihetsik’ireo milaza fa manohana ireo mba tsy hijanona ho resabe sy vava fotsiny ny hoe « hiaraka hanarina ny firenena isika ».
Tena ilaina ny fanohanana fa na ny vavan’ireo kandida milaza fotsiny aza hope, hanohana ny kandida izato isika dia efa maniraka ireo nifidy azy hifidy io olona io. Tsy ampy anefa izany ka tsy hipasoka ny efa malama fotsiny, fa tokony handray anjara amin’ny fanentanana ny vahoaka mpifidy handray anjara amin’ny fifidianana izy ireo, no hanentanana azy ireo hifidy ny kandida ho tohanany. Andrasana araka izany ny andraikitra raisin’ireo kandida tsy tafakatra ny fihodinana faharoa ka nisafidy hanohana kandida iray. Misy amin’izy ireo rahateo no efa nilaza ampahibemaso fa « manambola » ka afaka ny hanao hetsika ho fampandaniana ny kandida tohanany. Izay ilay fanohanana arahin’asa.
Ny tranopody no vitan’ny vava hoy ny fitenena. Ny filazana sy ny fanekena fa hanohana kandida iray dia tsy tokony arahina « fepetra », ka nampahatsiahy ny fihetsik’i Dadafara izay sady mahay atsy no mahay aroa ka izay nampetipety ny fiainany manokana no tohanana fa tsy nojereny akory na ny fandaharanasan’ilay olona na ny fomba fijeriny. Mitovy amin’izay ihany koa ny fihetsiky ny fanohanana miandry seza, satria milaza fa manohana androany dia miandry ny seza, toeran’ny minisitra na olom-panjakana ambony rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ilay kandida. Ny fanohanana miandry seza, dia miandry fotsiny eny ambony sezany any an-tranony sy any amin’ny lapany izy izay ho vokatry ny fifidianana fa tsy hanao hetsika, tsy hampiantso mpifidy, tsy hanao n’inona na inona.